I-China Custom Die-Cut Paper Cards Ine-Hanging Holes Manufacture and Factory |SIUMAI
Ukukhiqizwa kwamakhadi wephepha kuyindlela yokubonisa engabizi kakhulu.Ngokuvamile, sincoma isisindo nesitayela sekhadi lephepha ngokusekelwe isisindo somkhiqizo kanye nendlela yokubonisa.Amakhadi angamaphepha anobungani bemvelo kunamakhadi we-PVC.Izindleko zokukhiqiza ikhadi lephepha ziphansi futhi ukukhiqizwa kulula.Yamukelwa kabanzi futhi isetshenziswa yizo zonke izigaba zokuphila.Sivame ukusebenzisa iphepha lebhodi elimpunga, amakhadibhodi amhlophe, i-kraft paper, njll.Amakhasimende amaningi afuna ukuthi imikhiqizo iboniswe ngokuqondile, ngakho-ke ngokuvamile senza amakhadi ephepha lamabhamuza.Amafutha e-blister asetshenziselwa ukuvala ukushisa kwamagobolondo e-blister namakhadi wephepha.Ngemuva kokuthi iphepha ligcotshwe ngamafutha e-blister, lingavalwa ngokushisa ngomshini we-high-frequency.Amafutha e-blister ahlukaniswe ngamafutha e-PET kanye ne-PVC.Ephepheni lokuvala ukushisa, ukuvala uphawu lokushisa kwe-PVC kungasetshenziswa.Lokhu kungasiza ukuvikela umkhiqizo, futhi kungaba lula kumakhasimende ukubona umkhiqizo.Ukuze kuzuzwe inhloso yokuheha amakhasimende shazi.
I-MOQ Imvamisa ama-pcs ayi-10000, Sicela uthumele i-imeyili ukuze uthole inani elithile
Sadlula Kukho Konke
Ngo-2002, sanyathelisa izincwadi zokukhiqiza namalebula.Futhi waqala ukuzama ukukhiqizwa kwamabhokisi kathayela.
Ngokuhamba kwesikhathi, sazama izindlela nezindlela zokukhiqiza ezihlukahlukene.Ukusuka ekuphrinteni kwesikrini kuya ekuthengeni imishini yokuphrinta enemibala emine ukuya emishinini yokuphrinta ye-UV.Kusukela ku-glue yefolda eyodwa ezenzakalelayo kuya kuma-glue amafolda amane.Besilokhu sikhula njalo, futhi kancane kancane siye sathuthukisa umkhiqizo wethu minyaka yonke.
Sisungule ukupakishwa kwe-SIUMAI yomkhiqizo, sinethemba lokuhlinzeka umhlaba ngezinga eliphezulu kakhulu kanye nokupakishwa okunobungani kwemvelo ngobuchwepheshe bethu bokukhiqiza obuchwepheshile.
Singeze umnyango wethu wokuhlola ikhwalithi ukuze siqinisekise ukuthi sonke isixhumanisi sihlolwa ngokunembile futhi sihlolisiswa.Ukuqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa akunasici, akunabala, futhi akunakuqhathaniswa ngemininingwane, siphikelela ekusebenziseni izinto zokusetshenziswa zekhwalithi ephezulu ukukhiqiza ukupakishwa okuhle kakhulu.
Izinto zekhwalithi ephezulu, ezigqamisa ikhwalithi ephezulu
Khetha iphepha elikhethekile lekhwalithi ephezulu, iphepha liqinile, imigqa icacile, umkhiqizo oqediwe unhle kakhulu, nomoya osezingeni eliphezulu.
Ubuciko obuhle, ukuphrinta okuhle kakhulu
Ukupakishwa kwe-SIUMAI kunokuhlangenwe nakho okucebile okwenza ngokwezifiso, iminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza kanye nezingcweti zokunyathelisa ezicebile, ukuhambisa imikhiqizo yakho.
Ukuze siqinisekise ikhwalithi nokusebenza kahle kwemikhiqizo yamakhasimende ethu, sethula amathuluzi athuthukile ukuze uzizwe uvikeleke kakhulu.
Ukuvikelwa kwemvelo uyinki UV
Ukupakishwa kwe-SIUMAI kwethula okokusebenza okuthuthukile noyinki wekhwalithi ephezulu ukwenza imikhiqizo icwebezele futhi ikhange nakakhulu.
Ukupakishwa kwe-SIUMAI kunamangcweti amaningi okukhiqiza acebile ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yomkhiqizo akulula ukuyibhala.
Izinto ezisezingeni eliphezulu
Ukupakishwa kwe-SIUMAI kukhetha izinto ezifuywayo zekhwalithi ephezulu, ingaphakathi lomkhiqizo liyakhanya, futhi ikhwalithi yomkhiqizo iqinisekisiwe.
Sihlinzeka ngezinsizakalo zokuqinisekisa ukuqinisekisa ukuthi uklama umkhiqizo ophelele engqondweni yakho.
Siyakwamukela ukubuza, ikheli le-imeyili:
Okwedlule: Umbala Wokuphrinta Ukupakisha I-Chocolate Tea Storage Paper Tube
Olandelayo: I-SIUMAI Ibhokisi lokuthumela likathayela ngokwezifiso ibhokisi lekhadibhodi lebhokisi lebhokisi le-ziphu
Iphakethe le-earphone le-Mini Wireless bluetooth...
Isikomisi Sezinwele Esisontekile Esenziwe Ngokwezifiso...
I-CD box paper Record cover paper I-CD DVD I-VCD Cove...